Bhafu Ukutsala Intanda | Uya Kukhasa kwiiyure ezingama-24!
kuqala » Ukothula IiBhafu » Bath ukutsala lowo umthandayo
Ukukhangela okulungileyo bath ukutsala lowo umthandayo kungathatha iiyure kunye neentsuku.
Ezi ntlobo zokuhlambela ezingaqondakaliyo azikabikho kakhulu kwi-Intanethi kwaye kungenxa yesi sizathu ukuba sagqiba ekubeni senze eli nqaku linamandla.
Ukufumana uthando akusoloko kulula, ngamanye amaxesha umntu omthandayo akasikhathaleli, akazi ukuba uyasithanda okanye usile nje kwaye uhlala eshukuma.
Siyazi ukuba ukubandezeleka ngenxa yothando kunzima, ngoko ke sagqiba ekubeni sikubonise iibhafu ezi-3 ezinamandla ukusombulula le ngxaki.
Sihlambela abantu abatshatileyo, abathandanayo okanye abo bangazange babenabudlelwane nothando lwabo.
Ukuba ingxaki yakho ifumana ingqalelo yomntu, uthando kunye nokuncamathela, unokuqiniseka ukuba iya kusonjululwa.
Yintoni ukusetyenziswa kwebhafu ukutsala umntu othandekayo
Ngamanye amaxesha sinikezela ngeebhafu ngenjongo enye kwaye zineenjongo ezininzi.
Siza kuqhubeka sichaza injongo ephambili yazo zonke iibhafu ezichazwe kulo lonke eli nqaku.
iya kusebenzela bamba ingqalelo, ngenxa vusa uthando kunye nokuphelelwa lithemba ngaphakathi emntwini owunyulileyo, okanye usentliziyweni yamadoda onke akufutshane nawe.
Ngokusisiseko iya kuba luhlobo lomtsalane ekungekho mntu unokuwubaleka.
Khawufane ucinge ukuba umyeni wakho ebebaleka kakhulu ekhaya kwaye akahlali ekhaya ... Uthatha wavuka bath ukutsala lowo umthandayo yaye unokuqiniseka ukuba uya kukulungela ngakumbi ukuba secaleni kwakho.
Ngoku khawufane ucinge ukuba awunandoda ekujongileyo, uvele uthathe ishawa ukuze utsale umntu omthandayo ngemifuno kwaye uya kubona ukuba uya kuqala ukujongwa kuyo yonke indawo oya kuyo.
Njengoko usenokuba uqaphele, ezi bhafu zinokuba neenjongo ezahlukeneyo, kodwa zonke zihlobene uthando, umtsalane e ukukhuthaza.
Sineebhafu ezi-3 onazo apha ngezantsi, nganye inenjongo kwaye inezithako ezahlukeneyo, funda ukusebenziseka kwayo nganye kwaye uyisebenzise ngokukhawuleza!
Ibhafu yesinamoni ukutsala umntu othandekayo
I-Cinnamon ibonakalise ukuba inamandla kakhulu kwihlabathi elingaqondakaliyo.
Isetyenziswe ngokubanzi kwiindawo zokuhlamba, ukuvelana kunye nokwenza iminikelo kuThixo kunye no-Orixás.
Yintoni abantu abambalwa abayaziyo kukuba uyakwazi ukuhlamba ukutsala umntu othandekayo ngendlela engakholelekiyo.
Le bhafu iya kusebenza kukwenza ube nomtsalane ngakumbi kwaye ngaloo ndlela utsale amehlo ngakumbi, ngakumbi laa ndoda uyithanda kakhulu.
Ilingana nomyeni, isoka okanye umntu onomdla kuye.
Into ebalulekileyo kukuhlamba kwaye uzame ukuhlala ngakumbi naloo mntu ukuze ibhafu ifike kuye.
Jonga yonke le nkqubo ingezantsi:
I-rosemary encinci (ukhetho).
Ukulungiselela le bhafu inamandla ukutsala umntu omthandayo kulula kakhulu.
Sifuna ukuqala ngokukwazisa ukuba awunazo iintonga ze-cinnamon ezi-3 ungasebenzisa iicephe ezi-3 ze-cinnamon powder.
Ukucacisa oku, ungaqala ngokubeka iilitha ezi-2 zamanzi abilayo, nje ukuba amanzi abileyo wongeze iinkuni ezi-3 / amacephe esinamoni kwaye ushukumise kakuhle kakhulu.
Ukuba uyafuna ungongeza irosemary encinci, kuyakhethwa, kodwa sithanda ukuyibeka kwindawo yonke yokuhlamba kuba ibonelela nempilo.
Yiyeke yonke ibilise malunga nemizuzu emi-5 kwaye emva koko yiyeke ipholile. Ibhafu iyaphola kwaye ilungele ukuthathwa!
Siyayithanda le bhafu yesinamoni ukutsala umdla njengoko inokuthatyathwa nanini na naphi na apho ufuna khona! Kufuneka nje uthathe ishawa eqhelekileyo yococeko kuqala kwaye emva koko ugalele wonke umxube ukusuka emagxeni akho ukuhla.
Sincoma ukuvumela umzimba wakho wome ngokwemvelo emva koko kwaye ungagqoki iimpahla ezimnyama ekugqibeleni.
Emva kokuba ulungiselele kwaye uthathe ibhafu enamandla ungaqala ukuva iziphumo ngoko nangoko!
Sincoma oko phinda le nkqubo rhoqo ngeentsuku ezisi-7, eli xesha liya kuba ngaphezu kokwaneleyo ukuqala ukubona ukuphuculwa komtsalane wakho kunye nokuhenda.
Ngaba uyonwabela zonke iibhafu ukutsala umntu omthandayo? Asiyeki apho, jonga enye ngezantsi!
Ukuhlamba iirozi ukutsala umntu omthandayo
ebomvu namhlophe rose
As roses yenye yeesimboli eziphambili zothando, ngakumbi ezibomvu.
Sithanda ukuzisebenzisa kwiindawo zokuhlambela zomtsalane wobuqu, oko kukuthi, kwabo bantu sele bekunye namadoda, nokuba ngabayeni, ngabahlobo okanye ngabahlobo.
Ngaloo nto engqondweni, sagqiba ekubeni sipapashe i-rose bath enamandla ukutsala umntu othandekayo ngeentsuku nje ezimbalwa.
Iziphumo ziya kuba ngokoqobo ngokukhawuleza emva kokuhlamba kokuqala.
Umntu omthandayo uya kutsaleleka ngakumbi kuwe., ikakhulu ngokusondeleyo.
Lungiselela ukunyuka okungalindelekanga komnqweno osondeleyo.
I-1 rose ebomvu;
Usenokuba uqaphele ukuba zizithako ezi-2 nje ezilula, kodwa ungakhathazeki kuba ngamanye amaxesha ubulula yeyona nto ilungileyo esinayo!
Ukulungiselela le bhafu ukutsala umntu omthandayo ngokukhawuleza, ngokukhethekileyo kwiiyure ezingama-24, kufuneka ususe onke amaqabunga abomvu.
Emva koko, zibeke zonke zibilisa imizuzu eyi-10 kwiilitha ezi-2 zamanzi.
Gqibezela ngokuyiyeka iphole kwaye ucinezele umxube, kodwa musa ukulahla amagqabi erozi!
Okokuqala, thatha amagqabi eerozi ezibomvu kwaye uwasasaze kumgangatho wakho wokuhlambela, oku kuya kutsala ulwelo oluhle lokutsala umdla.
Emva koko, thatha ibhafu yakho yococeko olula kuqala kwaye emva koko ugalele amanzi afunyenwe ngaphambili ukusuka emagxeni phantsi ngokucothayo ngelixa ukhumbula lowo umthandayo ephuza kakhulu ngokucothayo kunye nothando oluninzi.
Emva kokuba amanzi ephelile, vumela umzimba wakho wome ngokwemvelo kwaye ujabulele izibonelelo ezinkulu zolu kuhlamba!
Njengokuhlamba ukutsala umntu othandekayo ngasentla, kufuneka kwakhona kuthathwe zonke iintsuku ezi-7.
Kufuneka uyenze kuphela inyanga enye, oko kukuthi, amaxesha ama-1.
Oko kuya kuba ngaphezu kokwaneleyo koku. bath ukutsala uthando vusa zonke iimvakalelo zomnqweno kunye nokuhenda kwiqabane lakho!
Bath ukutsala umntu omthandayo kwimifuno
Abasetyhini abaninzi bazijongela phantsi ngenxa yokungabi namdla kwicala lamadoda.
Ngethamsanqa, kule mihla yonke into inokwenzeka ngokukhulula iibhafu kunye nehlabathi elingaqondakaliyo kwaye ngokuhlamba kwemifuno sinokutsala inkangeleko engakumbi, ingqalelo engakumbi kunye neefowuni ezingakumbi kunye nemiyalezo evela emadodeni.
Sigqibe kwelokuba sibandakanye le bhafu inamandla ngenxa yamandla ayo okuphila kakuhle anxulumene namandla obuhle.
Wokwenza ube mhle ngakumbi emehlweni abantu kwaye uhambe phakamisa ukuzithemba kwakho.
Ukuba ucinga ukuba ufuna uncedo oluncinci ukuze wonwabe eluthandweni, musa ukulinda, sebenzisa amandla akho amakhulu.
7 amagqabi amhlophe erozi;
Isebe le-rue eli-1;
1 intyatyambo ye-chamomile;
Qala ukuhlamba ukutsala umntu othandekayo kunye nemifuno ngokubeka iilitha ezi-2 zamanzi abilayo.
Emva koko yongeza zonke izithako, unokongeza i-1 ngexesha.
Vumela ukuba ubilise kunye ubuncinane imizuzu eyi-10 kwaye emva koko unako kwaye kufuneka uyisuse emlilweni.
Lindela de kuphole yonke into kwaye uxinzelele kwaye udibanise, ushiye amanzi kuphela, kwaye ulahle zonke izithako eziseleyo kwinkunkuma kuba umsebenzi wakho sele wenziwe.
Ngoku thatha nje ibhafu enamandla ukutsala amadoda okanye abafazi.
Ukuhlamba oku kufana ngokufanayo nazo zonke ezinye.
Kufuneka nje uhlambe kuqala kwaye emva koko ugalele umxube ofunyenwe ngaphambili ukusuka emagxeni ukuhla.
Zivumele zome ngokwemvelo kwaye ujabulele zonke izibonelelo zokuhlambela i-herbal ukukhanga, ukukhohlisa kunye nokuthanda.
Udinga nje ukuphinda ukuhlamba rhoqo iintsuku ezili-15 ixesha elingenammiselo, oko kukuthi, kulungile ukuyithatha iinyanga kunye neenyanga.
Bopha amandla amakhulu we bath ukutsala lowo umthandayo, nokuba yindoda, umfazi, umyeni, isoka okanye isithandwa.
Sebenzisa imifuno, isinamoni kunye neerozi ngeyona ndlela yokuphucula ubomi bakho kwihlabathi elingaqondakaliyo.
Ungaze ulibale ukuba nokholo oluninzi kuyo yonke inkqubo yokuhlamba, kuphela emva koko uya kufumana iziphumo ezibalaseleyo!
1 Yintoni ukusetyenziswa kwebhafu ukutsala umntu othandekayo
2 Ibhafu yesinamoni ukutsala umntu othandekayo
3 Ukuhlamba iirozi ukutsala umntu omthandayo
4 Bath ukutsala umntu omthandayo kwimifuno